Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) - Hello Sayarwon
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း)
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ကဘာလဲ။
Color blind ဟာ အရောင်တွေကို မမြင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဆိုလိုပါတယ်။ အချို့အရောင်တွေကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း နည်းပါးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် သင့်မှာ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင် (သို့) အခြားအရောင်တွေကို မြင်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ Color blind လူနာ တွေမှာ ဘာအရောင်မှ မမြင်ရသူဟာ ရှားပါးပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Color blind ဟာ အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေမှာထက် ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ အမြင်အာရုံ မကောင်းခြင်းနဲ့ မွေးဖွားလာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Color blind ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အရောင်အချို့ကို မြင်နိုင်ပေမယ့် အချို့အရောင်တွေကိုတော့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တွေကြားမှာ ခွဲခြားနိုင်မှု မရှိပေမယ့် အပြာရောင်နဲ့ အဝါရောင်ကိုတော့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
အမဲ၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်ကိုသာ မြင်နေခြင်း။ ဒီအခြေအနေကတော့ ရှားပါးပါတယ်။
အမြင်အာရုံပြဿနာတွေကို သိပေမယ့် မသိခြင်း။
အရောင်အချို့ကိုသာ မြင်နိုင်ပေမယ့် လူအတော်များများကတော့ အရောင်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ အရောင်အချို့ကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်းနည်းပါးတယ်လို့ ထင်ရင် မျက်လုံးစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာလည်း ကျောင်းမတက်ခင် အရောင်စစ်ဆေးမှုအပါအဝင် မျက်လုံးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လူအတော်များများက Color blind ကို မွေးရာပါလို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးတွေ၊ ရောဂါတွေ၊ အသက်ကြီးခြင်းတွေကလည်း Color blind ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မွေးရာပါရောဂါ – ဒီအခြေအနေနဲ့ မွေးလာခြင်းဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေထက် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရောင်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းချို့ယွင်းခြင်းကတော့ အနီ-အစိမ်း မကွဲခြင်းဖြစ်ပြီး အပြာ- အဝါ မကွဲခြင်းကတော့ ရှားပါးပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ မပြင်းထန်ရာမှ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေအထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးမှာ ရှိတာဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်မှုဟာတော့ ဘဝတစ်လျှောက် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါဘူး။
ရောဂါများ – ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးချို၊ ရေတိမ်၊ macular degeneration, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, အရက် ကြာရှည်စွာ သောက်ခြင်း၊ သွေးကင်ဆာ၊ sickle cell anaemia တွေမှာ Color blind ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေဟာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုသာ ထိခိုက်ပြီး တစ်ခါတရံမှာတော့ နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ အကြောင်းရင်းကို ကုသရင် Color blind ဟာ ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
အချို့ဆေးတွေ – အချို့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ နှလုံးဆေး၊ သွေးပေါင်ကျဆေး၊ erectile dysfunction၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အာရုံကြော ရောဂါတွေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနတွေဟာ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးခြင်း – အသက်ကြီးခြင်းကြောင့်လည်း အရောင်တွေကို မြင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးနိုင်ပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Color blind ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မျိုးရိုးဗီဇ – မျိုးရိုးဗီဇဟာ Color blind ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အမေ၊ အဖေ၊ အဖိုးအဖွားတွေ Color blind ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
ဆေး – မျက်လုံးထိခိုက်စေတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ hydroxychloroquine ဟာလည်း ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်က စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပြီး သင်ဘယ်လောက် အရောင်ခွဲခြားမှု ရှိသလဲဆိုတာ စစ်ဆေးပြီး Color blind ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အစက်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး သူတို့မှာ ရှိတဲ့ pattern ကို ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နံပတ်၊ စကားလုံးတစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်မြင်ရတဲ့ အရာကိုကြည့်ပြီး ဆရာဝန်က သင်ဘယ်အရောင်ကို မမြင်နိုင်ဘူးလဲဆိုတာ ပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုမှာတော့ ရောင်စုံအတန်းလေးတွေကို ဆင်တူတဲ့ အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး စီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ Color blind ဆိုရင် အရောင်သေချာစီနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကလေးတွေ အသက် ၃-၅ နှစ်အတွင်း မျက်စိစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကျောင်းမတက်ခင် မျက်စိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်ပြီး အကောင်းဆုံးတော့ ၃-၄ နှစ်ကြား ဖြစ်ပါတယ်။
Color Blindness (ကာလာဘလိုင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တကယ်တမ်းတော့ color blind အတော်များများကို ကုသလို့ မရပါဘူး။ color blind ဖြစ်ခြင်းဟာ ဆေး၊ အခြားအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။
အရောင်ပါတဲ့ မျက်မှန်၊ အရောင် မျက်ကပ်မှန်တွေကို တပ်ခြင်းဟာ သင့်ကို contrasts ပိုမြင်ရစေပြီး အရောင်တွေ ကွာခြားမှုကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း မြင့်မားစေပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်အမြင်အာရုံးကို ကောင်းမွန်စေပေမယ့် အရောင်ခွဲခြားမှု စွမ်းအင်ကို တိုးတက်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ block glare ပါတဲ့ မျက်မှန်ဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Glare နဲ့ တောက်ပမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အမြင်အာရုံပြဿနာရှိသူတွေဟာ အရောင်တွေကြားက ကွာခြားမှုကို သေချာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အရောငတွေအစား တောက်ပမှု၊ တည်နေရာ အစရှိတာတွေကိုလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ မီးပွိုင့်မှာ အရောင်သုံးရောင်တည်ရှိပုံကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Color blind ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Color blind ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အရောင်ပါတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အစဉ်ကို မှတ်သားပါ။ မီးရောင်ကို သေချာမခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာပြီးဘာလာတယ်ဆိုတာ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
အခြားအရာတွေနဲ့ တွဲချင်တဲ့ အရောင်ရှိတဲ့ အရာတွေကို label တပ်ထားပါ။ အမြင်ကောင်းတဲ့သူကို မေးမြန်းပြီး သင့်အဝတ်အစားပေါ်မှာ စာရေးထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သင့်အဝတ်ဘီဒိုထဲမှာ အစဉ်အတိုင်းထားခြင်း (သို့) အရောင်နဲ့ အံဆွဲထဲမှာ စီထားခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Poor color vision. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/poor-color-vision/basics/definition/con-20022091. Accessed June 12, 2016.
Color Blindness - Topic Overview. http://www.webmd.com/eye-health/tc/color-blindness-topic-overview. Accessed June 12, 2016.